Soo dejisan Bitcoin 0.19 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware softwareBitcoin
Qeybta: Software software
Bogga rasmiga ah: Bitcoin
Bitcoin – software ah oo loogu tala galay in la lacagta lagu digital nidaamka Bitcoin ka shaqeeyaan. Hawlaha ugu muhiimsan ee codsiga waxaa ka mid ah: awood u leh inay helli, oo sir ah, la abuuro buugga cinwaanka saaxiibo ah, qufulka Jeebka iwm Bitcoin awood u isticmaala si ay isu dhaafsadaan Shilimaad Bitcoin taariikhda network iyo aragtida kala wareejinta. Software waxa uu isticmaalaa network baahinta in ay ka hortagtaa in ay xakamayn iyo in ay saameyn ku nidaamka qiimaha sarrifka, si aad isaga celiso xisaab ama bedelaada hoose ee isticmaala ah.
La shaqaynta lacagta qadaadiicda Bitcoin
Isticmaalka shabakad baahinta
View of history macaamilka ganacsi
64 qayb (x64)
Soo dejisan Bitcoin
Faallo ku saabsan Bitcoin
Bitcoin Xirfadaha la xiriira
GnuCash – maamule maaliyadeed oo isku dubbaridan si uu ula socdo socodka lacagtaada iyo faahfaahinta kale ee ganacsiga.
HomeBank – waa qalab wax ku ool ah oo lagu xakameeyo lacagaha. Software-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la socoto kharashyada ama dakhliyada oo aad ka turjunto mowqifka dhaqaale qaab jaantus.
Kaydinta Xog-uruurinta HOA – waa barnaamij loogu talagalay marin u helida xog ururinta ururka guryaha leh. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu baaro macluumaadka lagama maarmaanka u ah, maareeyo dheelitirka koontada oo fiiri taariikhda bixinta.
Moonphase – waa barnaamij cilmiga xiddigiska ah oo siiya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan wejiyada kala duwan ee Dayaxa sanadka la xushay, bisha iyo maalinta.
FreeMind – waa qalab lagu isticmaalo khariidadaha maskaxda. Software-ku wuxuu awood u siinayaa inuu hirgaliyo fikradaha iyo qorshooyinka qaab qoraal ama qaab qorsheyaal.
software The si ay u qabtaan hawlaha xisaabta ah injineernimada iyo heerka cilmiga sayniska. software wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo qalab for falanqaynta, xisaab iyo jilidda xogta.
Kaabashada EaseUS Todo – waa barnaamij loogu tala galay soo celinta iyo soo celinta xogta haddii ay dhacdo xaalad lama filaan ah. Software-ka ayaa awood u leh inuu ku celiyo nidaamka nidaamka hada socda.
AnyTrans – softiweer loogu talagalay wareejinta faylka labada-dhinac ee u dhexeeya iPhone, iPod, iPad iyo computer. Softiweerku wuxuu leeyahay qalab aaladaha lagu maamulo xogta.
Tool si aad u hesho macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka qalliinka. Software soo bandhigayaa sifooyinka qalabka rakiban.